China ịghasa ebu rụpụta na Factory | Obodo Chinatown
Onye na-ebugharị anyị na-ebugharị bụ nke kwesịrị ekwesị maka ịbuga ntụ ntụ, granular, lumpish, ezigbo na ihe ndị siri ike dị ka kol, ash, ciment, ọka, na ihe ndị ọzọ. Ngwongwo ihe kwesiri ekwesi kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 180 ℃. Ọ bụrụ na ihe dị mfe iji mebie emebi, ma ọ bụ agglomerated, ma ọ bụ ihe ahụ dị nrapado nke ukwuu, ọ gaghị adị mma ibuga ya na igwe a.
A na-etinye wiwi a na-atụba ya na casing. A na-enye ngwaahịa ndị a na-edozi ahụ ma ọ bụ nke a na-emepụta pulverulent n'ime igwe ahụ ma na-ebufe ya ihu gaa na ntanye na-agbapụta site na nkedo na-agbagharị agbagharị na shaft.
Iji nweta ezigbo ebugharị ebugharị maka ihe na-ebu ọka, na-ebugharị nri, na-ebu nri fodder ma ọ bụ na-ebu malt, a na-adụ gị ọdụ ka ị tụlee ngwaahịa anyị nke edepụtara nkọwa ya n'okpuru.
1. Akụrụngwa na-abịa na ụdịrị modular yana ịkpụzi ngwa ngwa.
2. Enwere ike ịhazi ọnụọgụ na ntanetị dị ka achọrọ
3. Thelọ na-ekpochapu uzuzu na-eduga n'ịdị ọcha.
4. The ịghasa ebu dị mfe ịnọgide na-enwe.
5. Ngwunye ike oriri na-arụ ọrụ dị ala dị.
6. Ejiri ihe eji eme nri ma obu bia ihe nkpuchi nri puru iche.
7. Onu uzo nfefe na nchedo nchedo nke onwe di.
8. Inlet trough onwem na a na-aga n'ihu siri ike-ofufe ịghasa maka edo nchekwa biini ihapu.
9. Ntinye uzo di nkpa nke ihe nkedo na-abia na uzo slide.
10. A na-eji ihe mkpuchi ọtụtụ corrosive eme ihe maka ihe ndị dị n'èzí.
11. Uzo eji agba uzo adighi.
12. Na onye na-ebugharị ihe na-ebugharị, e nwere njikọ na-agbanwe agbanwe n'etiti draịva na eriri igwe.
13. The kehoraizin mode na mmasị mode bụ ma maka ihe na-erute, nkesa, collection, inggwakọta na-agbapụta n'ahụ.
14. Ihe nkedo a na-ejikọ ya na ihe nkedo na-ebugharị, isi ụda, ọdụ ọdụ site na njikọta agbakwunyere. N'ihi ya mmegharị axial adịghị mkpa maka nwụnye, na nkwụsị, na-eme ka ndozi ahụ dị mfe.
15. Ihe mgbakwasị ụkwụ maka okpokoro isi na ọdụ ọdụ na-adị ma na mpụga nke casing nke ịghasa ebu. Onye ọ bụla na-ebu na-abịa na teknụzụ akara mkpuchi dị iche iche iji gbasaa ọrụ ndụ nke ndụ.
1. The igwe anaghị agba nchara ịghasa na trough nwere ike kwukwara maka ọka wit dampening ma ọ bụ ntụ ọka iji nweta mma idebe ihe ọcha.
2. A nakweere ụdị ihe nkedo a na-atụgharị ya maka ịgwakọta.
3. Ahaziri uwe nke agba bụ ịnara maka anyị ịghasa ebu.
4. Ala n'ọnụ ụzọ ámá bụ ịnara maka mfe nhicha nke ịghasa na trough.
.Dị Max. Ike (t / h) Max. MGBE (r / min) Ịghasa dayameta (mm) Ịghasa nkeji (mm)
Ntụ ọka Wheat
MMA 16 5 11 150 160 160
NXU 20 10 22 200 200
UB25 18 40 250 250
NJ32 35 80 320 320
Nke gara aga: Gburugburu Link Chain Conveyor
Osote: Chain ebu